2 Samuweli 9 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
9 Wathi ke uDavide: “Ngaba kusekho nabani na oseleyo wendlu kaSawule, ukuze ndimenzele ububele bothando+ ngenxa kaYonatan?”+ 2 Ke kaloku indlu kaSawule yayinomkhonzi ogama linguTsibha.+ Ngoko bambizela kuDavide, waza ke ukumkani wathi kuye: “UnguTsibha na?” yena ke wathi: “Ndingumkhonzi wakho.” 3 Waza ukumkani wahlabela mgama wathi: “Akusekho bani na kwindlu kaSawule, ukuze ndimenzele ububele bukaThixo bothando?”+ Wathi ke uTsibha kukumkani: “Kusekho unyana kaYonatan, osisiqhwala.”+ 4 Wandula ke ukumkani wathi kuye: “Uphi na?” Ngoko uTsibha wathi kukumkani: “Khangela! Usendlwini kaMakire+ unyana ka-Amiyeli eLo-debhare.”+ 5 Ngoko nangoko uKumkani uDavide wathumela waza wamthabatha endlwini kaMakire unyana ka-Amiyeli eLo-debhare. 6 Akungena ke kuDavide uMefibhoshete unyana kaYonatan unyana kaSawule, kwaoko wawa ngobuso waza waqubuda.+ Wandula ke uDavide wathi: “Mefibhoshete!” yena ke wathi koko: “Nguye lo umkhonzi wakho.” 7 Waza uDavide wahlabela mgama wathi kuye: “Musa ukoyika, kuba nakanjani na ndiya kukwenzela ububele bothando+ ngenxa kaYonatan uyihlo;+ ndikubuyisele onke amasimi+ kaSawule uyihlomkhulu, udle isonka rhoqo etafileni yam.”+ 8 Yena waqubuda waza wathi: “Uyintoni na umkhonzi wakho, ukuba ubheke inja efileyo+ enjengam nje?” 9 Ke kaloku ukumkani wabiza uTsibha, umlindi wakwaSawule, waza wathi kuye: “Yonk’ into ebiyekaSawule neyendlu yakhe yonke ndiyinikela+ kumzukulwana wenkosi yakho. 10 Uze umlimele umhlaba, wena noonyana bakho nabakhonzi bakho, nize nimzisele isivuno, sibe kukutya kwabo bangabomzukulwana wenkosi yakho, bamele badle ke; kodwa uMefibhoshete yena, umzukulwana wenkosi yakho, uya kudla isonka rhoqo etafileni yam.”+ Ke kaloku uTsibha wayenoonyana abalishumi elinesihlanu nabakhonzi abangamashumi amabini.+ 11 Ngoko uTsibha wathi kukumkani: “Ngokuvisisana nako konke oko inkosi yam ukumkani amyalela kona umkhonzi wakhe yindlela aya kwenza ngayo umkhonzi wakho; kodwa uMefibhoshete+ udla etafileni yam njengomnye woonyana bakakumkani.” 12 Ke kaloku uMefibhoshete wayenonyana oselula ogama linguMikha,+ yaye bonke abo babehlala endlwini kaTsibha babengabakhonzi bakaMefibhoshete. 13 UMefibhoshete yena wayehlala eYerusalem, kuba wayesidla rhoqo etafileni kakumkani;+ yaye wayeqhwalela ezinyaweni zakhe zombini.+